Mipimo miviri mu linuxist - komunisiti pati | Linux Vakapindwa muropa
Chaizvoizvo, pandinotaura izvozvo ndinoona kuti iyo magariro and the linuxism vane zvakafanana zvandinoreva, asi kwete, vanopenga, kunge chikomunizimu chirwere kana chimwe chinhu. Ndinomuda zvikuru Stallman saAllende asi kwete, ini handizvishingise kuti ndivatevere kune iyo tsamba, kuwanda shanduko kunonetsa kuti mwana wevanhu aite mukushandisa uye nguva yakaratidza kuti ndakarurama.
Chikomunisti chekare chakakundikana
Icho chinhu icho isu tese chatinoziva kuve neashoma eyakajairika tsika, sisitimu iyo, nekuti yaive yakanyanyisa uye isingabatike, yakaratidza kusabatsira kwayo nezviitiko zvakasiyana siyana kutenderera pasirese.
Nyaya yeRussia: Nyaya inokatyamadza zvikuru yekukundikana, yaive iyo yaigara maSoviet, vakaramba kuita bhizinesi nenyika dzekuMadokero, vakarambidza zvivakwa zvavo, vese vaive vakafanana (kunyangwe paine vanhu nguva dzose vakaenzana kupfuura vamwe vachiri muchikominisiti ). Kuvhara kwake uye kuda kwake kurwa neUnited States kwakasiya zviuru zvevanhu vachifa nenzara.
MuChina: Ivo maChinese, vapenyu zvakanyanya kupfuura vavakidzani vavo, vakasarudza pakuona kunonoka kwehupfumi hwavo, kuvhura nyika. Kommunism yakajairwa haina kuvashandira, asi pavakavhurira pasirese vakakura zvakanyanya zvekuti iko zvino vanotyisa nyika yekutanga.
Kiyuba: Ivo vakagara zvakafanana senguva dzose, kubva 1950 kusvika nhasi uye kunyangwe ivo vachipomera kuvharirwa, kukundikana kweiyo modhi yezvehupfumi iyo inokonzeresa zviuru kutsvaga nzira imwe kana imwe kutiza kubva munyika dzadzo chiratidzo chekuti mhosva haina mumwe kunze kweku pachavo.
Linuxism yakasimba iri kuenda nenzira imwechete?
Nei ndichiti zvinogona kuenda kukundikana? Tevera dzidziso yekunyanyisa senge ye Stallman, iri mukomana mukuru, asi zvishoma pamusoro, zvinova zvakaoma kuunza kuhupenyu chaihwo.
Chii FSF Izvo, kubva mumaonero angu, kufunga kuti isu tese takafanana uye kutenda kuti munhu wese anogona kufarirwa neyechete bhizinesi modhi: tsigiro uye yemahara software. Yemahara software yakanaka, Ini ndinoda kuita chimwe chinhu, kuchigovana uye ndichiri kugona kuwana mari. Asi havasi vese vanofunga zvakafanana uye vaisatofanira kudaro.
Kana iwe ukashandisa proprietary software iwe hauna hunhu
Ndokumbirawo, ndinoziva kuti proprietary software (seinodiwa naStallman kuidaidza) haisiyo yakanyanya kunaka, iyoyo zvingave zvakanaka kuti uone kodhi yacho, asi shandisa software yemahara chete iyo utopia ye 99% yevashandisi. Uyezve, kushuvira kuti ma software ese asununguke rimwe zuva zvinoita kunge kurota kwakanaka kwandiri, asi kure kure nezvokwadi. Ndinoda zvakare kuti software igare yakasununguka, asi makambani ane mvumo yekusarudza mabhizimusi avo mamodheru uye yemahara software haigare iri sarudzo inobatsira kwazvo.
Yo Ini ndaive mumwe wevandaida shandisa chete yemahara software uye kuva pamutemo zvachose, asi tarisa kuti zvinhu zvipi, ndichishandisa Linux chete, handikwanise kutaura kuti ndine zana muzana zviri pamutemo. Hazvina kana kukwana kungoshandisa mahara software kuti umire kuve "zvisiri pamutemo". Pandinonyora chinyorwa ichi, ndiri kuteerera mimhanzi ine playlist yandakaita paYouTube, uye ndofungidzira kuti chii, hongu, mavhidhiyo ese anotyora copyright kubva kune chero ezvinyorwa zvinyorwa. Kunyangwe dai ndaida, parunhare mbozha ne mp3 dzese nziyo dzandiinadzo dzakasununguka, nekuti vamwe ini ndakateedzera "nzira yakaipa" Saka manje Ini ndakadzora mazhinji acho mahara, zviri pamutemo uye mimwe yakawanda mimhanzi yemahara. Asi havasi vese, saka Ndichiri pirate.
Ini ndaida kushandisa Yemahara Software, asi ivo vakandiudza kuti ndaizopera Flash uye chii chandingaite pasina angu Iwe Tube mavhidhiyo? Vakandiudza kuti ndishandise GNASH, asi hazvibatsiri pazvinhu zvakawanda. Ini ndoda kuenderera kuve neyangu kutenderera-kuutio asi ivo vakandiudza kuti ini ndaisakwanisa pasina "proprietary" controller. Izvo chete izvo Ini handina hunhu mumaziso aRichard Stallman.
Vazhinji vanokanganwa kuti kufashukira neakateedzana avanofarira zvakanyanya kunotyora kodzero uye kwakashata sekushandisa "backup" yeshamwari yeWindows XP. Uye neXP yakavanzika kopi haishande, nekuti iwe unoshandisa password kuimisa iyo isiri yako.
Ini handinzwe nemwero wetsika wekubvunza windowsuario. Kune izvo ini ndine nzira refu yekufamba uye mazhinji eiyo MITEMO zvakare.
Kana iwe uchida kuve wakasununguka zvechokwadi, usateedzere iyo MITEMO
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Yakapetwa zviyero mubato re linuxist
Kuti iwe uri muyero wakapetwa hazvireve kuti munhu wese anobatanidzwa mune yemahara software iri. Chinhu chimwe chete kushandisa software yekutengesa nekuti hapana dzimwe nzira dzemahara (patent, matekinoroji, nezvimwewo) asi izvo zvinogona kushandiswa zviri pamutemo, Nvidia inopa mutyairi wemakadhi ayo mahara, uye Adobe inopa Flash player yeLinux ku hapana muripo uye chimwe chakasiyana zvakanyanya ndechekuti pasi pechirevo icho iwe unoshandisa zvemukati zvaunowana zvisiri pamutemo (nziyo, nhevedzano, nezvimwewo), chenjera kuti pangave nemutemo, ini ndinosiya nyika yaunonyora, mairi kwete zvese zvaunoita zviri zvisiri pamutemo, zvinogona kunge zviri mhosva yevagari chete uye inogona kunge iri mhosva. Asi ini ndinoomerera kuti chokwadi chekuti maapuro kana mapera unofanira kushandisa proprietary software hazvikupe rusununguko rwekutyora kodzero dzevamwe. Ini ndinoshandisa uye kusimudzira yemahara software kune ayo mabhenefiti uye mabhenefiti, kana ini ndisina imwe sarudzo asi kushandisa flash kana windows nezvikonzero zvebasa, ini handioni dambudziko hombe kana, sekureba sekunge zviri pamutemo.
Zvisinei, ndinofunga ndagumbuka zvishoma ...
Zvinoitika kwauri semakoministist makominist, vanoda kuenzana, hukama nehukama asi chero bedzi vaine BMW mugaraji neimba pamhenderekedzo yegungwa.
Iwe unogona kurarama zvakakwana pasina izvi zveumbozha sezvaunogona "cyberlive" zvakakwana pasina chero proprietary software zvachose.
Ini handisi mukominisiti asi iwe unofunga kuti hurongwa hwemabhizimusi hunoshanda?
Iwe unofunga kuti inoshanda here kumamirioni avanhu vanoziya nenzara mazuva ese muAfrica?
Munhoroondo zvakaratidzwa kuti nekutora zvinhu kunyanyisa, zvinogara zvichipera zvakashata.
Rafael Hernamperez akadaro
Ndine dzimwe nguva 100% yemahara shamwari, asi vanoisa rusununguko pane vamwe vese, vavanozova, mune yavo yakanaka, vanyengeri.
Rusununguko kuremekedza mafungiro uye sarudzo dzevamwe. Ini ndinoda yemahara software, asi iwe unofanirwa kufunga nezve izvo chaicho zvinodiwa nevashandisi vaunoshanda navo, uye nemhedzisiro yaingave nayo pahupenyu hwavo. Kune imwe, yemahara software ndiyo yakanaka, uye kuti vamwe vanoishandisa ndiyo ingave yakanakisa. Asi vamwe vese vakadzidza neWindows, uye vachichinja "kwete kupora" kana "kunzwa senge." Ndicho chokwadi, uye hatigone kumanikidza Linux kana OpenOffice nekuti ndiyo yakanakisa, nekuti chakanakira ini chingave chakanyanya kukuomera.
Ini ndinotenda mune nyika umo zvese zvinofanirwa kuve nenzvimbo yekutipfumisa isu tese. Pfungwa, sarudzo kana yakanaka haina kukwana. Remekedza uye goverana zvese ... irwo rusununguko.
Pindura kuna Rafael Hernampérez
@John Doe: Haisi iyo pfungwa. Ichi chinyorwa hachisi kukumbira ruregerero kune capitalism asi kudzivirira grey, zvine chekuita nevatema nevachena sekuziva kwaKls.
@McLarenX: Iwe unoshandisa Linux isina Flash? Hai haana kumbotora mp3 yep2p?
Ini handifunge nezvehutongi hwemauto hwenyika dzataurwa semamonist. Ini ndichiri kufunga kuti iyi modhi yave kuda kuburitswa uye kuti inofanira kubuda mumapollote senge chero imwe demokarasi modhi. Kunyangwe ndichibvumirana newe kuti kunyanyisa hakuna kumbobvira kwakanaka.
Pindura kuna nordri
mmmm, ndavhiringidzika kuti ndinzwisise zvataurwa. Ndibvise mukukahadzika, zvingave zvisiri pamutemo here kana kuti zvisina hunhu kushandisa software yekambani? Nezve mp3 nezvimwe, zvisiri pamutemo zvinotsanangurwa muchimiro chemitemo yenyika kana boka revanhu. Zvino hunzenza ndechimwewo chinhu, sezvo zvichinzi zvinokurukurwa nezvehunhu "wepasirese" uye zvine chekuita nehurukuro yekare ye "yakanaka" ne "yakaipa." Zviripachena kutaura nezveunzenza kunogona kuenda kure.
Ini handione chero chakaipa nekushandisa proprietary software kana ndichiida. Ini ndinofunga kune vanhu vanofanirwa kugovana kugona kwavo (sevanyengeri sezvazvinogona kudaro) uye vamwe vanofanirwa kupindura kune zvimwe zvinodikanwa zvakanyanya sekuve nemari yakakwana yekurarama (kana kupfuma sezvingave zviripo), ne ndinoreva vanhu vanogadzira software uye zvavanokurudzira. Zvinotaridza kuti kugadzirwa kwese kwemunhu kune mutengo wazvo kubvisa software, zvinoita kunge zvisina kunaka kwandiri. Wese munhu anogona kuita zvavanoda nechigadzirwa chake, uye pakati peicho chiri kuzvitengesa, sevamwe vanotengesa rutsigiro nemasevhisi.
Handitende kuti unogona kugara chena kana dema chete, sezvatisingakwanise (kana kusakwanisa kutakura) kushandisa YOSE nguva nevaya vatinoda (dzimwe nguva zvakafanira kupatsanura), kana kuchengetedza pfungwa yezvematongerwo enyika pasina kutaurirana, kana iva nekutenda uye usave nekusahadzika kwakanaka. Kana pasina kupokana kwezvikamu, hapana kukura. Ini ndinotya kuti kunyanyisa kwevamwe vagadziri ve software kunogona kutungamira mukumira kwehunyanzvi hwekuvandudza (kufunga nezve "Taliban" yeLinux neWindows).
Zvakare ndakaparadzira zvakawanda.
Vanyori venhoroondo vanofunga kuti Chimurenga cheRussia kuva chekutanga uye chega hurumende yemakomunisti. Asi kana Russia, kana China, kana Cuba maCommunist, asi magariro. Socialism uye Communism ZVAKASIYANA ZVINHU.
Kana iwe ukaverenga iyo Communist Manifesto yeMarx (Nhungamiro kuKomunizimu yevaDummies) iwe uchaona kuti kuti ushandise kwakachena komunizimu, Hurumende haifanire kuvapo. Uye muRussia, China neCuba zvakapesana chaizvo zvinoitika: kwaive / kune hofori nyika yaisanganisira zvese.
Pindura kune FaQ
@FaQ: Ndatenda nekatsamba, ini ndichafunga nezvazvo. Rega zvijeke kuti nyaya yecommunism haisi yekusimbisa yechinyorwa, asi kuti unzwisise kuti hutongi hwehutongi nehurongwa hwehutongi hwakavharwa sei pasi (hutongi hwehudzvanyiriri hwePinochet hauna kundishandira semuenzaniso) asi hwakabatana nepfungwa yakafanana, inopera nekukundwa kana kusarudza zororo rezviyero zvakatemerwa kuti urarame, izvo zvandinoisa ndizvo zvichave zvichaitika neanorwisa-windista linuxists (huyai, avo vanomhanyisa, avo veStallman).
FaQ: Kujekeswa kunoongwa, asi chidzidzo chakasiyana ...
Mune kumwe kutaura, dingindira rekomunizimu, capitalism uye akawanda maisms akanyatso kudetembwa, asi iwe unogona kusiya mavara padivi uye uone meseji yepositi.
Vapoteri vakarurama, kutora rudo rwauinarwo rwemahara software kune zvakanyanyisa kunogona kutorwa zvakashata, vanhu vachangobva kudzidza kuti mahara software "vanotya" apo pachinzvimbo chekuburitsa kunaka kwerinux, pane nzvimbo yakawanda yakaipa inova windows.
Zvese zviri muMircrosoft zvakashata? Linux yakakwana? Bill Gates ari ascii da 666? Mari dzeMicrosoft hadzisi dzekubatsira asi kugadzira vashoma vanoshandisa? Handitendi mazviri.
Pindura kuna braulioaquino
Ndiri kuzobata tsika dzevapoteri zvishoma ... xD
MuSpain, mutemo unotaura kuti hazvisi pamutemo kukopa mp3 kuburikidza nep2p. Usatomboisungirira. Chinhu chisiri pamutemo ndechekuchibira. Mune mamwe mazwi, ibudise muCDAudio.
Kunge mafirimu: P
Flash inopa rubatsiro rwemahara. Chete mune dzimwe nyika ndipo chete panodikanwa macodec anofungidzirwa kunge asiri pamutemo. Uye vatyairi, nhasi, ndiwo makambani anovapa vakasununguka zvachose.
Saka ... kudivi iro, uye zvirinani munyika yangu, nyaya yacho yagadziriswa.
Zvino nyaya yecommunism. Ini handifunge kuti vane zvakawanda zvakafanana sezvavanoda kuti zvionekwe (zvirokwazvo MS neMac, makambani eNorth America, vanobvuma kuona Linux secommunism, handina mubvunzo nazvo).
Zvandinoreva? Zvakanaka, komunizimu inotanga kubva pane fungidziro yekuti zvese ndezve wese, hongu. Zvakafanana nekodhi yekodhi. Zvino, zvinhu zvinochinja, kubva panguva yandinokwanisa kugadzirisa kodhi yekodhi uye ndokuitengesa nenzira yepamutemo zvachose.
Pachave nevaya vasingade / vanogona kubhadhara, handiti?
Saizvozvowo, kana Stallman kana Tolvards havasi "baba vadiki Stalin." Uye vamwe vese vakazvitaura nenzira yakajeka FaQ xD
Communism haisi socialism. Panyaya iyi, linux inogona kuve chinhu chinoshamisa mukati mehutungamiriri, hongu. Asi hapana chinotadzisa chero munhu kutora kodhi uye nekugadzira chigadzirwa chekutengesa. Chinhu zvachose capitalist. Uye kana zvisiri, funga nezveRed Hat kana Mandriva.
Imwe nyaya, radicalisms, yakaipa zvisinei nekuti unovatarisa sei. Nehurombo, kana ndiri mukugadzirisa vhidhiyo, ini ndichatenga Mac uye (zvikuru kudemba kwangu pamutengo) ini ndichabhadhara zvavanokumbira iyo software. Uye ini handioni izvo zvisiri pamutemo kana zvounzenza. Ndinoona zvakakodzera.
Ini ndinoshuva kuti dai paine mahara software zvirinani pane zveimba Izvi hazviwanzo kuitika uye dzimwe nguva iwe unofanirwa kubhadhara. Asi ini handifunge kuti ndichave capitalist freak.
Ndiri kuona yakaipa pirating nekuti hongu (kesi yekushandisa pirated windows kungo sada kudzidza chimwe chinhu zviri pamutemo) uye ndinovimba vanozivisa zvishoma nezvishoma masisitimu anotadzisa vanhu kubiridzira OS asi zviri pachena, kana ndichida kuishandisa, uye zviri kwandiri pfuma… handione chakaipa.
Kunyangwe ini ndisingazvifarire, hongu.
Ini handizive, ini ndinofunga hapana yakawanda nhoroondo sezvaunoda kuona. Hazvina mhosva kuti unozviona sei.
Uye Bill Gates mu ascii haape 666, asi ndine chokwadi chekuti kana ndikapisa CD windows mumoto, ndinowana zvakanyorwa zve «Sisitimu yekuvasunga vese uye kuvaunza kurima» (Icho hachisi changu, asi zvakandiitira nyasha zhinji pandakaiverenga).
Ala, ipapo ini ndinosiya tochopost.
@Nacho: Ndatenda nekumira, ndakatotsanangudza kuti iyi nyaya yecommunism haisi yekusimbisa pamusoro, asi ini ndichiri kuturika mutongo mugomba reinki remashoko ako.
Panyaya iyi, linux inogona kuve chinhu chinoshamisa mukati mehutungamiriri, hongu. Asi hapana chinotadzisa chero munhu kutora kodhi uye nekugadzira chigadzirwa chekutengesa. Chinhu zvachose capitalist.
Kugadzira yekutengesa chigadzirwa chihombe here? Nyika yakapa zvese muUSSR here? Zvese zvinhu zvese zvese? Kunyangwe zvisingakoshi zvakanyanya?
Bhizimusi rakazvimirira raive risipo uye maindasitiri makuru akaitwa nyika, asi kuburitsa chigadzirwa kutengesa hazviite senge capitalist hunhu kwandiri uye ndine chokwadi kuti maRussia mazhinji akagadzira zvinhu uye akazvitengesa, kunyangwe hazvo bhizinesi repachivande rakanga risipo zvakadaro. Kunyangwe iyo nyika pachayo inogadzira zvigadzirwa zvinotengeswa (kwete zvese zviri zvemahara mune zvemacommunist masystem), mari ichiripo.
Hongu, asi icho chinangwa che capitalism kuita mari. Ini ndinogona kugadzira linux ndotengesa iyo 1 euro, asi ndinogona zvakare kuitengesa makumi maviri, ndichitsvaga kuita mari.
Uye izvo zvine hunyanzvi. Pandinotengesa linux, ndinotsvaga kuita mari, kwete yeGNU, iyo SL kana amai vakavabereka (imwe linux tovarich tolvards) kuve nemukurumbira, kana chero chinhu.
Ini ndinotsvaga rubatsiro rwangu.
Zviri izvo kuti Stallman akanyanyisa kuomerera pane izvo.
Semuenzaniso haashandise dandemutande sezvatinozviziva, anotumira email ku "yake" server kuti averenge webhu, ipapo anomutumira email zvakare ine zvinyorwa chete, uye ndizvo chaizvo zvinoongorora stallman.
Rarama senge paMars.
Pindura kune viperhoot
Kana isu tese tiri makashata emakopi, zvakanaka vese vari vanhu vakaita saiyo super yonky vanogona kuzadzisa zvese kune iyo tsamba
Ah, iyo wget xD yandakanga ndanzwa, asi ndakafunga kuti kwaive kuseka: /
Ini ndinofunga kuti iyo posvo iri chaizvo chaizvo, sekutaura kwandakaita mune yakataurwa pamusoro apa, kuti ini ndinoshandisa linux kana openoffice uye kuti iyo inoti ndiyo yakanakisa hazvireve kuti ichaita zvakanakira munhu wese. uye maererano naStallman murume iyeye anosvuta, zvinofungidzirwa kuti haashandise nharembozha nekuti sisitimu yakavharwa xD, iri kutobuditswa mumusoro.
Wakarurama sei, chokwadi ndechekuti handirege kushandisa Windows nekuda kwefotoshop, uye nekuda kweprinta yangu, kana ikatsigira Ubuntu, ini ndaizoshandisa Ubuntu pamabasa angu ese, asi hapana nzira iri iyo: S
Ini ndinongovimba kuti yakawanda yemahara uye software yandinoshandisa ndeye 100% inoenderana ne linux
Hmm, ndinobvumirana pane zvimwe zvinhu (senge maonero ako ekuona grey, kuti hazvisi zvese zvakasviba kana zvichena, uye kuti zvakanyanyisa zvakashata) uye ini handibvumirane nevamwe: zvinoita kwandiri kuti ndinotarisa kufanana kwemahara zvakapfava necommunism kusanganisa mapeya nemaapuro. Ndanzwa zvakare vanhu vachiita fananidzo nechitendero ... kwandiri zvinhu zvakasiyana, uye kuzvisanganisa zvinogona kuvhiringa vanhu. Kune vezvematongerwo enyika uye vamwe vadziviriri vemabhizimusi nevadziviriri vemahara software (senge Zuva, IBM, Linus Torvalds, Eric Raymond). Ok ok, ndinoziva zano rechinyorwa rakanga risiri iro, asi fananidzo inosuruvarisa ...
Imwe nyaya, iwe sarudza kurodha mimhanzi, mavhidhiyo, akachengetedzwa nekodzero ndeyekuti uve pirate: S Zvinoenderana nenyika, muArgentina mutemo hauna chokwadi uye hapana mutemo wekuziva kana zviri pamutemo kana kwete 
Nyaya yesoftware yakasiyana, nekuti mutemo unonyatso kujekesa kuti "Iyo yekuchengetedza kopi inogona kusashandiswa kune chero chimwe chinangwa kunze kwekutsiva iyo yekutanga kopi yeiyo ine rezinesi komputa chirongwa kana iyo yekutanga yakarasika." Mune mamwe mazwi, kushandisa kutsemuka hazvisi pamutemo, hapana mubvunzo.
Neichi chikonzero, yega yega ine maitiro avo etsika uye anotarisa zvimwe zviito zvine hunhu (hongu, vanofanirwa kutevedzera mitemo).
- Zvese zvandinazvo pc yangu zviri pamutemo. Iyo software ndeye 99% yemahara uye yakasara freeware kana neayo marezinesi.
- Ndine mimhanzi uye mavhidhiyo anotorwa kubva paInternet. Asi ini handizviona sezvisiri pamutemo, nekuti ini handibatsirwe nazvo. Ini ndinosarudza kurodha mimhanzi yemahara ndobva ndabhadhara $ 100 mune recital kana $ 20 mumamuvhi.
- Ini handitenge mafirimu, mimhanzi kana zvinwiwa chero zvodii. Izvo hazvisi pamutemo (pasina kupokana, nekuti pane purofiti) uye ini handidi kupa nekusimudzira iyo yakatumidzwa zita Piracy. Uye vanhu vazhinji vanoseka pandinovaudza izvi, HAZVIMWE zvakafanana kutora mimhanzi sekutenga trucho cd. Ini ndinofungidzira kuti kana ndikada (yebasa kana chero chinhu) imwe yehunyanzvi software (iyo yakakosha kudarika $ 1000 XNUMX) uye ini ndisingakwanise kuibhadhara, ndingadai ndisina imwe sarudzo asi kuibvarura uye hongu, ndingadai. Neraki, haisi yangu nyaya.
Uye zviripachena ini handisi 100% yakachena, xq, semuenzaniso, ndayambuka matsvuku marobhoti (uye pamwe ndicharamba ndichidaro). Kana iwe uchifunga nezvazvo, kuremekedza mimwe mitemo kazhinji hazviite uye hapana anoita. Kana mitemo yekopi ichiteverwa kune tsamba, ndinofanira kuteerera kumumhanzi nemahedhifoni, kuitira kuti vavakidzani vangu varege kuuteerera zvisiri pamutemo: S
Zvakanaka, ini zvakare sarpe, ini handiwedzere zvimwe: P
Ndinokurudzira kuverenga chinyorwa ichi:
Kuenzanisa Mahara Software necommunism (kana socialism) hazvina kunaka. Yemahara software yakazvarwa, uye inokura nerusununguko uye nekubvumirana kutsigirwa kwenhengo dzayo. Izvo hazvimanikidzwe kune vazhinji sezvo nyika ichimisikidza mitemo yayo kunofungidzirwa kuti "socialist" nyika, umo misiyano ne capitalist nyika ishoma.
Ini ndinofunga kuti kana RSM yakatiomesera mufilosofi yayo nehurukuro, inozviitira kutidzivirira kuti tisapinda mukunyengera nekunyepedzera ("Ini ndinoshandisa mahara software chete kana ichindikodzera, kana ichinetsa kana kushata, ndinoshandisa proprietary software "). Enda !!
Kunakidzwa chokwadi: kana iwe usina kucherechedza, RSM ndeye anarchist, kwete mukominist, uye izvo zvinogona kuoneka zvese muzvinyorwa zvake uye mune zvirevo zvake.
Iri RMS (Richard Matthew Stallman); RSM chirongwa cheTV: P
Kune vamwe vese, ndinobvumirana nezvaunotaura ...
Hehe, iRMS, ndine hurombo. :)
Pane zvakawanda zvakawandisa mune chinyorwa. Kutanga, apo FSF painotaura kuti hazvina hunhu kushandisa software yepamutemo, inoreva nyaya yekodzero dzatinadzo uye dzinotyorwa nemarezinesi ekuti, ndezvekuti ndezvekudzivirira kodzero dzedu dzemakomputa. nhoroondo chiitiko chechangobva kuitika (hapana mutemo wakajeka uye mazhinji akaitwa nemamonopolies).
Chechipiri, yemahara software chikamu chehupfumi hwazvino, inokurudzira musika wepachena uye kusimudzira kwenzvimbo mukupesana nehumambo, ndiko kuti, inotsvaga kusiyanisa musika uye kuigonesa. Kuti uwane izvi, unofanirwa kuwana mukana mukugadzirwa kwetekinoroji, ndiko kuti kodhi. . . asi ichi ndicho chete chidimbu cheaizi yechando.
Haisi chena, nhema, kana kuchena. Ndiwo mukana wekugadzirisa zvinhu uye kuzviita zvakaenzana kune wese munhu.
Ndinovimba maonero angu anobatsira. . . Kwaziwai!
@rocandante: Ndatenda nekumira, kunyangwe iwe usingabvumirani neni, maonero ako anobatsira zvakanyanya kuti uve nemaonero akasiyana.
Ini ndichaedza kupindura ako maonero ekuona:
1- Unozvitaura wega: FSF inoti haina hunhu pfeka proprietary software, ini handina kunge ndakanganisa, zvirinani mune izvo.
2 - ndinodzoka kuzotsanangura kwenguva yegumi nemana kuti chikonzero chikuru nei ndichishandisa chandinoti chiCommunism chekare semuenzaniso inyaya yekufananidzwa kwemafambiro maviri aya mune imwe pfungwa: Kuti ivo vanokanganisa uye kana ndikamhanya, mutopian.
Red Nyeredzi LinuxRed akadaro
Rarama kwenguva refu Red Star Linux!
Pindura kuRed Star LinuxRed
Saka kuti iwe uzive chimwe chinhu sezvaunotaura, chetsika yakajairika, iyo yemakomunist system haina kushata, pane zvinopesana inogona kukubvumidza iwe kuti urarame nenzira iri nani mauri kurarama parizvino, asi iwe unongoedza kungotsoropodza iwe usingazive, zvakare kuitira kuti iwe uzive zvishoma, zvakakundikana sezvaunotaura, nekuda kwenyika dzema imperialist dzinoziva kuti gutsaruzhinji idambudziko uye vanovhara magonhi ehupfumi hwavo, saka chikomunizimu chinofanira kunge chiri pasirese, aaa nechimwe chinhu, hapasati anga ari nyika dzechiKomonisiti nekuti Pasina kupokana ndinokuvimbisai kuti vacharamba vachimira, pakave nenyika dzehukosiyasi senge hurombo hwakatsakatika URRS, asi vakangowana magariro, izvo zvinoreva kuti kuchine kurwa kune vevabati kuti vabudirire chikomunizimu. , inova magumo anofadza, uye chinangwa chakadzvanyirirwa. Zvakanaka kana zvisiri, saka nditumirewo email kuti ndikutumire rumwe ruzivo kana kurudziro kubva kumagariro evagari vemo pamwe nemabhizimusi kuitira kuti uve nemutongo wakanaka.
aaa, ndine urombo kuti ndakaverengazve zvawakanyora, uye rimwe zuva une ushingi hwokutevera huzivi hwaMarxist-Leninist, sei uchifungidzira kana ukasaita shanduko iwe kana ini, ndiani achazviita? usafunge zvakashata zvakadaro panogara paine chikonzero chakanaka nei kurwa kuchikosha.
visa ndiro zita rangu akadaro
Mhoroi, ini ndiri Lluis Visa, kiredhiti kadhi kangu ndeinotevera: 9130 1000 3009430, maita basa
Pindura vhiza izita rangu
Kufambisa moyo weWindows